China FOTON C8L EV orinasa sy mpanamboatra | Foton
Natao ho an'ny tanàna kely sy salantsalany izy io, mahafeno ny filan'ny fitaterana isan-karazany toy ny làlan'ny sampana ao an-tanàna sy ny fitaterana interurban. Fomba eropeana manavao sy manokana, tsara sy vaovao, mitarika ny fironana lamaody fitateram-bahoaka.
Refy ankapobeny 8540 * 2450 * 3000/3100
Fahaizan'ny mpandeha / seza 56-67 / 12-31
Ny fitambaran'ny fahafaha-manao, ny fahazoana miditra ary ny orinasan'ny habakabaka anatiny, miaraka amin'ny emission zero, dia mamaritra ny ADNn'ity bus vaovao ity. Ny bus Foton C8L EV dia mifanaraka amin'ny filan'ny fitaterana isan-karazany amin'ny làlan'ny sampan'ny tanàna sy ny fitaterana interurban.
Ny fitambaran'ny fahafaha-manao, ny fahazoana miditra ary ny orinasan'ny habakabaka anatiny, miaraka amin'ny emission zero, dia mamaritra ny ADNn'ity bus vaovao ity. Ny bus Foton C8L EV dia mifanaraka amin'ny filan'ny fitaterana isan-karazany amin'ny làlan'ny sampan'ny tanàna sy ny fitaterana interurban. Manasongadina ny endrika kanto minimalista tsy misy firavaka firy, mamorona toetra sy sary mora fantatry ny mpampiasa izy io.
maotera maharitra mandrakizay
Vita tamin'ny rafitra fanaraha-maso fiara mizaka tena mandroso, miaraka amina taona maro niasa ara-barotra, ambony kokoa ny tahan'ny mpanatrika.
Fandrafetana rafitry ny angovo matevina
miaraka amin'ny kilometatra fandidiana 80-120 kilometatra miaraka amin'ny enta-mavesatra feno, ary 2-3 fotsiny isan'andro ny famahanana isan'andro ary koa ny androm-piainan'ny bateria 8-10 taona.
mahafeno karazana filàna fitaterana isan-karazany amin'ny làlan'ny sampan'ny tanàna sy ny fitaterana interurban.
Rafitra fanamafisana ny mari-pana
Mahatsapa ny lalàna mifehy ny hafainganam-pandeha mifototra amin'ny filàn'ny taratra hahazoana fahombiazana sy fitsitsiana angovo avo lenta.
GPS atambatra amin'ny terminal fanaraha-maso horonan-tsary dia manome antoka fa ny mpiasa ao amin'ny fitantanana dia afaka manara-maso ny toerana misy ny fiara sy ny toerana misy ny fiara fitateram-bahoaka ary miatrika ny raharaha avy hatrany, toy ny fiara diso tafahoatra na ny fifanolanana ataon'ny mpamily amin'ny fifampiresahana amin'ny feo
Ny rafitra dia manasongadina ny firafitra ambaratonga mirindra amin'ny famolavolana nozaraina sy ny fitantanana afovoany, mahatsapa ny fizarana vaovao eo amin'ny gara sy ny fiara ary manatsara ny fahafahan'ny loharanon-karena misy
Rafitra fitantanana an-tsambo — iTink, miaraka amina vokatra fiarovana ny tontolo iainana marani-tsaina, fanohanana ny fandidiana manan-tsaina ary serivisy mahaolona, ​​mamorona sehatra fitantanana tafiditra ho an'ny olona, ​​fiara ary lalana